Andry Rajoelina «Tsy mpangala-bato aho”
Ny taona 2019 dia fifidianana roa no tanterahana : solombavambahoaka sy ben`ny tanàna ary mpanolotsaina.
Niely ny feo fa nikononkonona fangalaram-bato ny filoham-pirenena sy ny tompon’andraikitra teo anivon`ny CENI ka nanatanteraka fihaonana matetika teny Iavoloha tamin`ireo fifidianana roa ireo. Nandiso izany ny filoha omaly. Tsy mora no manao zavatra, hoy izy, satria vahoaka maro no soratana ao anatin`ny lisi-pifidianana. Maro ny dingana arahina mba handeha araka ny tokony ho izy. Nohamafisiny hatrany fa tsy mpangala-bato izy ary tsy nanome toromarika tamin`izany. Notsindriany fa sakana amin`ny fampandrosoana firenena ny tsy fitoviana hevitra sy firehana ara-politika kanefa firenena iarahana manana. Raha ny fampandrosoana ny firenena no katsahina dia tokony hifanome tanana ny rehetra, hoy ihany izy. Nandritra ny fiarahabana ny governoram-paritra indray dia nohamafisin`ny filoha ny anjara andraikitr`izy ireo. Notsindriny hatrany ny asa goavana miandry ny governora eo amin`ny fampandrosoana eny ifotony toy ny lafiny soslialy. Velirano dia zava-dehibe ny fampandrosoana. Tsy tokony hisy intsony ny distrika adino. Hisy ny tombana atao amin`ireo governora amin`ny fanatanterahana ny asa nampandraketana azy. Mila mametraka ny laharam-pahamehana ihany koa sy mampivondrona ireo ben`ny tanàna sy solombavambahoaka. Nambarany hatrany fa hotendrena tsy ho ela ireo governora ambiny. Tonga niarahaba ny filoham-pirenena noho ny asaramanitry ny taona vaovao teny amin`ny lapam-panjakana Iavoloha ireo governoram-paritra, ny CENI ary ny akademia Malagasy omaly.